Radio Don Bosco - Ny voany no hahafantaranareo azy
Nampitandrina antsika i Jesoa eto, amin’ireo mpaminany sandoka. Izy ireo izay miseho ho irak’Andriamanitra nefa dia miteny amin’ny alalan’ny tenany. Miseho ho tena mpitarika sy kristianina ihany ko izy ireo nefa dia ny hanapotika izany no tanjony.
Matetika isika dia mandre fa misy olona nahazo hafatra avy any an-danitra na nisehoan’i Jesoa na nahita fahitana taminy. Ity Evanjely ity dia manasa antsika indrindra amin’ireny tranga ireny mba ho mailo sy hahay handanjalanja. Rehafa tsy mifanaraka amin’ny Evanjely sy ny fampianaran’ny Eglizy ny ambaran’izy ireny dia azo lazaina fa fitaka sy lainga avokoa.
Ary i Jesoa efa niteny : "Tsy izay miantso hoe : Tompoko, Tompoko no tena mpianatro, fa ireo manatanteraka ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra" (Mt 7, 21).
Noho izany, aoka ary isika tsy ho sodoka amin’ny teny tsara lahatra fa hita amin’ny asany eny foana izy ireo. Mila mifototra amin’ny Evanjely sy izay ampianarin’ny Eglizy àry isika, mba tsy ho voarebirebin’izy ireo.
Tompo ô, aza avela hivily amin’ny lalanao izahay. Amen.